Qaab Dabiici Ah Oo Aad Iskaga Baabi'in Karto Finanka Wajiga - Daryeel Magazine
Kulanti wanaagsan, waa qeyb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha badnaa ee cunto karinta, nafaqaynta iyo qurxinta jirka ee Cooking With Hafza. Dumar badan ayaa ku dhib qaba finanka wajiga.
Maanta waxay hafza nala wadaagaysa qaabka loo baabi’in karo finanka wajiga kasoo baxa ee dad badan ay ku dhib qabaan iyadoo la isticmaalayo scrub dabiici ah oo laga samaynayo sonkorta madow liin dhanaan iyo malab. Alaabtaan jikadaada ay ka heli kartaa
-Liin dhanaanta waxaa ku jira vitamin C oo dhalaaliya goobaha madmadow sidoo kalana daaweeya daldaloolada.
-Sonkorta madow waxaa ku jira glycolic acid oo nadiifiya daldaloolada iyo wajiga ka qaada qolofka iyo haraga dhintay.
–Malabka waxaa ku jira maadooyin anti-oxidants oo ka hortagga gabowga maqaarka isla markaana dubka ka ilaaliya qalaylka. Malabku waxaa ka mid yahay waxyaabaha dabiiciga ah ee lagula dagaalamo finanka wajiga
Waxaad ku darsan kartaa saliid saytuun waxaa ku jira Vitamin E oo maqaarka jilciya, qooya, gabowgana la dagaalama.
Alaab Dabiici Ah Oo Caawisa Wajiga Saliida Iyo Finanka leh Daldaloolada Wajiga (Open Pores) 4 Qaab Oo Aad Iskaga Yareyn Karto Baruurta Caloosha 6 Siyaabood Oo Aad Iskaga Ilaalin Karto Daalka Iyo Caajiska Xilliga Shaqada